Taariikhdii Abwaan Xasan Sh. Muumin (AUN) | Somali Wiki
Home / Aqoonyahan / Taariikhdii Abwaan Xasan Sh. Muumin (AUN)
Posted by: somaliwi in Aqoonyahan, Fanka February 14, 2017	Comments Off on Taariikhdii Abwaan Xasan Sh. Muumin (AUN) 835 Views
Taa dambe, waxay fursad u siisay inuu diyaariyo agaasinka waxna ka alifo barnaamijyka “Riwaayada Raadiyaha,” hab taxane ah dadweynuhu aad u hiigsado. Halkaas ayuu ku soo caan baxay. Hawshiisii ugu horeysay, wuxuu abaabulay Riwaayada la magac baxday: “Hubsiimo hal baa la siistaa.” Isla markiiba xigtay Golaha Murtida & Madadaalada lagu furay: “Shabeel Naagood,” ayadu noqotay heer caalami. Waxaa turjumay Macalin Goosh (Andrzejwski: Leopard Among the Women, London, @1974, OUP). Waxaa xigay “Gaara Bidhaan” iyo “Ehelunaar Adduunka.” Labadan dambe iyo guud ahaan fikradihiisa, waa labo sheeko mujtamaca taabanaya. Tan hore, waxaa ayaamahaas kulmay, dhalinyaradii wadanka waxbarasho dibada ugu maqnaa iyo soo laabadkoodii ayagoo soo guursaday hablo caddaan ah. Sheekada wadanka jirtay umbuu taabtay, waxay bulshadi ku noqotay: “Meel bugta iyo fartay is og.” (hoos ayeynu kaga hadli doonaa).
Halkan waxaa inooga soo baxaya isaseega (iska soo horjeedka) iyo ekaansho ka dhex muuqda labo maanso. Iyo wax hoos u qarsoon oo ay tahay qofka dhagaysanaya
inuu kala soo baxo ubucda maansada. Midaa weeye ta dhadhanka goonida u yeelaysa maansada.
Haddanna wax fara badan wadaaga qaar muuqda iyo mid qarsoon (Compartative Analysis). Inta waxaa dheer riwaayadiisa sare ku soo xusay, “Gaaraa Bidhaan,”
waxay isku miisaan wadaagaan riwaayadda Cali Sugule, “Kalahaab iyo Kalahaad.” Ayaguna wakhigooda ayey leeyihiin. Waxaan isleeyahay buuggani wuxuu gaarsiiyo meel uusan haaban lahayn la’aantii, dhinac walba marka laga eego. Waxaan ka qoray, malahayga, dhowr cadad ayey u baahan yihiin in lagu soo wada koobo. Kolayba in aan abaal uga dhigo ayaa i dulsaaran. Asagana naxariis iyo jannada Fardowsa Ilaahay ha ka waraabiyo eheladiisana iyo Soomaalina samir iyo iimaan ha ka siiyo.
Previous: Taariikhda Cusmaan Gacanlaw AUN
Next: Taariikhda Nuur Xuseen Cabdi